Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Garsoorayaal oo maanta ku kulmay Muqdisho – SBC
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Garsoorayaal oo maanta ku kulmay Muqdisho
Muqdisho, Soomalia, Febraayo/28/ 2013 ) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulan xassaasi ah Madaxtooyadda kula qaatay 60 Garsorayaal oo ka kala socday Maxkamada Sare, Maxkamada Dhexe iyo Maxkamada Gobolka. Kulanka ayuu Madaxweynaha kaga hadlay sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa Garsoorka oo tiir weyn ka ah “Lixda Tiir Siyaasadeed” ee Madaxweynaha.
Madaxweyne Xassan ayaa wuxuu yiri” Sidii aan horay idiinku sheegay in la xushmeeyo cadaaladda waxey ka bilaabataa Madaxda. Aniga marnaba faraha lama geli doono Maxkamadda iyo go’aanada ay gaarto.”
“Amniga waa muhiimadda ugu 1aad ee dowladda,laakin hadii aysan cadaalad jirin amniguna ma jiro” Amniga iyo cadaaladda wey wada socdaan. Dadkeena in ay dareemaan nabad, waa in ay arkaan in sharcigu iyo cadaaladda in ay shaqeynayaan.”
“Hadii uu shacabku ku qanacsan yahay sida aad wax u xukuntaan oo ay u arkaan in ay cadaalad jirto, shacabku wuu idin xushmeynayaa.”
“Hal xukun oo ku dhaco iyada oo aan laga fiirsan ayaa anaga oo dhan na saameynayo. Aduunku wuu na eegayaa waxeyna eegayaan in aan nahay ummad cadaalad ku dhisan. Xukunka haku deg-degin ee mar walbo sharciga hakuu noqdo garab.”
“Ma sahlano howsha na hortaalo mana heysano dhaqaale nagu filan, laakin waa in aad sharciga dhowrtaan. Shacabkeena waa in ay dareemaan in ay heystaan cadaalad iyo garsoor ay aamini karaan.Garsoorka waa in uu noo noqdo hormuud si aan ugu soo kabsano dhibkii nagu dhacay, amnigana dib usoo noqdo. Intaas ayaa muhiim ah”
“Waa in aan dib u habeyn ku sameyno sharciga. Waa in aan ka tashanaa wixii sax ah iyo wixii u baahan in dib loo hagaajiyo.”
Wixii faah-faahin ah kala soo xiriir:Malik Abdalla,Agaasimaha Warfaafinta Villa, Somalia, Muqdisho, media@presidency.gov.so
— Communication Office Office of the Somali President Mogadishu, Somalia